TKT – BSI Learning Academy
Home Programs TKT
TKT (Teaching Knowledge Test) Preparation
TKT ဆိုတာ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်စွမ်း ရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ပညာဗဟုသုတစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အောင်လက်မှတ် ရယူလိုသူများအတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါတယ်။
TKT စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူများဟာ မိမိတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပြသနိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ Modular Teaching Qualification များစွာကို ဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Module များကို မိမိကြိုက်သလောက် ဖြေဆိုနိုင်ပြီး ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသမျှ Module တိုင်းအတွက် Cambridge English Certificate တစ်ခုစီကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
TKT Module တွေကတော့
(၁) Module 1: Language and Background to language learning and teaching
ဘာသာဗေဒ အခြေခံ လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် သင်ကြားပေးခြင်း အပိုင်း
(၂) Module 2: Lesson Planning and use of resources for language teaching
သင်ခန်းစာများ စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဘာသာစကားသင်ကြားရာတွင် အကျုံးဝင်နိုင်မည့် အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲခြင်း အပိုင်း
(၃) Module 3: Managing the teaching and learning process
သင်ကြားခြင်းနှင့် သင်ယူခြင်းဆိုင်ရာများကို ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း အပိုင်း
TKT shows how you are developing asateacher. It is ideal for people who want to prove their teaching knowledge withaglobally recognized certificate. TKT isaflexible series of modular teaching qualifications, which test your knowledge in specific areas of English language teaching. You can take as many modules as you want, over any time period. You receiveaCambridge English certificate for each module you complete.